AKHRISO-Ra’iisul wasaare Rooble oo farriin deg deg ah u diray madaxda dowlad goboleedyada
October 17, 2020 Xuseen 6
Raysalwasaaraha Soomaaliya ayaa warqad u diray Madaxda dawlad gobaleedyada Dalka si ay u soo gudbiyaan 2 xubnood oo uga qeyb-noqonaya guddiga doorashooyinka heer Federaalka, heer Dawlad gobaleed iyo Xalinta Khilaafka.
Guddigan, waxaa dhismihiisa horey ugu heshiiyey madaxda dowladda federalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul gobaleedyada, waxaana la sugayaa kahor 20-ka bishan oo ay maalmo kooban ka harsan yihiin.
Gari Allay taqaannaa!
Ra’iisal wasaare, inta aadan farriin u dirin maamul beeleedyada, yaa shaqadan iska lahaa? Dad badami waxa ay qabaan in shaqadan uu iska lahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka. Waxaa marka la leeyahay, waxaa wanaagsanaan lahayd in marka hore uu ra’iisal wasaaruhu xukuumad soo dhiso inta uusan farriintan qorin.
Midda kale, jaalle ra’iisal wasaare, yaa maanta ka arrimiya waddanka? Ina Farmaajo si toos ah buu awooddiisii ugu wareejiyey horjoogayaasha maamul beeleedyada; waddanku waa bilaa madaxweyne.
Gunaanadkii, ra’iisal wasaare, adiga ma aha masuulkii soo qori lahaa warqaddan ee wasiirkii ku shaqada lahaa ee lagaa sugayey magacoow marka hore. Ummaddan tabaalaysanna jaha wareerka, isku tuur tuurka iyo ciyaarta hallaga daayo.
Mahdi ,maxaa daba dhigay ninkaan, haduu istaago wuu istaagayaa. sow xafiis gaara malaha, muu iska fariisto xafiiskiisa, shaqadu xafiiskey ugu imaan laheyd. ma farmaajaa daba dhigay?
Mahdi oo ah ninak farmajo u addegsadey inuu isku dayo walina wada burbbruta somaliland oo aha ninki abuurey jabahaddii caare iyo xumaan oo dhan ka dhan ah somalialnd waa ninki kuwaad ee kabo qaad u noqda mdaxda konfur hada raysal wasaraaha cusub malaon kasta waa daba joogaa meel kastu tago wa ajoogaa waa basaas uu daba dhigey faramajo waa caado qaate aan laheyn hami raganimo waxaan maqleyetthopai ka yami ma la aodhan karaa isana waa baaaas xabshi aha sida farmajo u yahey basaad xanashi ah
Shaki kuma jirto , Mahdi inuu yahay Xabashi qurun ah, oo dil uga qoran yahay, Somaliland iyo meelo badan oo Somalidu degto sida Puntland iyo Jubbaland, adeerkii oo kelyaha laga saaray oo jooga Holland oo soo koriyey buu salaanta ka qaadi waayey oo Abdirahman la yidhaahdo, waa nin bakhtiyey si xunna waa u dhiman doonaa, markii la soo xulayey waxaa soo xushay xabashida 100%
Geeele.. Adiga dameeer ayaa ku xushay.
Qof marka aad caayayso, wax ayaa la hanbeeeyaa… sida dhilooyinka ha caytamin… adeeer